नेपाल–भारत सीमा समस्यामा पश्चिमाको चासो : प्रस्तावित राजदूत शर्मा | ईमाउण्टेन समाचार
मंसिर २०, २०७८ पढ्न १० मिनेट
काठमाडौं । भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शंकर शर्माले नेपाल–भारत सीमा समस्याप्रति पश्चिमा देशको चासो रहेको बताएका छन् । सिंहदरवारमा सोमबार भएको संसदीय सुनुवाइमा उनले नेपाल–भारतको सीमा समस्याप्रति पश्चिमा देशको चासो रहेको बताएका हुन् ।
आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यक छ । विश्वास ठूलो कुरा हो । सजिलै गर्न सकिने दुइटै देशलाई फाइदा हुनेगरी विश्वास बढाउँदै जाने हो । रणनीतिक रूपमा डायस्पोरा कम्युनिटीको साथमा रणनीतिक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । भारतमा भएका अवसरलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्न पहल गर्नेछु । पहिलो शिष्टाचार भेट र सम्बन्ध नै हो । भारतमा विभिन्न देशका १३६ राजदूतावास छन् । यसमा नेपालले कसरी प्रभावित पार्ने भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो । नेपाललाई प्रभाव पार्ने सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक नीतिहरू परिमार्जनका लागि पहल गर्ने काम गर्छु । भारतमा सामाजिक र सांस्कृतिक कुटनीतिलाई महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सोही बैठकमा सांसदहरूले पनि आ–आफ्नो विचार पनि राखेका छन् ।
शंकरजी भारतभन्दा बेलायत गएको भए हुन्थ्यो । राजनीतिक सम्बन्धमा चल्ने भारतमा कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ ? यत्रो अनुभव भएको मान्छे राजनीतिक सम्बन्ध सर्वपरी रहेको भारतमा कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रअनुसार भारतसँग कसरी समान प्रकारको हैसियत र सम्बन्ध स्थापित गर्नुहुन्छ ? खुला सीमा, सीमा विवादको प्रश्न, कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत विभिन्न ठाउँमा सीमा अतिक्रमण छ ? यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? सन् १९५० को सन्धी समयसापेक्ष अपडेट गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, यसमा कसरी पहल गर्नुहुन्छ ?
पञ्चशीलको सिद्वान्त छ, मान्यता छ, उहाँहरूको चासो सुरक्षा संयन्त्रतिर छ । सन्तुलित ढंगले कुटनीतिक भूमिका निभाउन चुनौती छ । भारत र पाकिस्ताको विवादले अघि बढ्न सकेको छैन । कसरी सहकार्य गर्ने, अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा नै हो । चुनौती छ । चुनौतीलाई मनन गर्नुहोला ।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समानता भएको देश हुन् । राजनीतिक सम्बन्धभित्रको विश्वास नभएको देश भएकाले चुनौती छ । विकास र प्रविधिमा धेरै अगाडि बढेको देशमा राजदूतबाट के अपेक्षा गर्ने त ? विश्वासको वातावरण बनाउन विगतका राजदूतले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु सकेनन् । अब नयाँ ढंगले जानुपर्छ । सम्बन्ध निर्माण नयाँ ढंगले हुनुपर्छ । धार्मिक पर्यटन, धार्मिक सम्बन्ध पनि महत्त्वपूर्ण छ । पर्यटनमा पनि फाइदा लिनुपर्छ । यसलाई नयाँ आयाम र सम्बन्धका रूपमा लैजान चुनौती छ । तर, भारतप्रति जनताको विश्वास अभिवृद्धि गराउने, भारतप्रति नेपालीको विश्वास बढाउने काम गर्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारस्तरमा पनि सहकार्य, भारतसँग प्रदेशको पनि सम्बन्धअघि बढेको छ । त्यसको लागि पनि नेपालमा स्टकर तयार गर्न भूमिका हुनुपर्छ । भारतप्रतिको विश्वासलाई प्रगाढ रूपमा लैजाने चुनौती छ । आफ्नो कार्यकालमा कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
लिपुलेकमा दुई देशीय होइन त्रिदेशीय रूपमा हेर्नुपर्छ । यहाँको पालामा कुनै समस्या नआओस् ।
भारतसँग हामी डिमोरलाइज भएर प्रस्तुत भइरहेका छौं । राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उठाएर, आँखामा आँखामा जुधाएर यथार्थ कुरा राख्न सक्नुहोस् ।
सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित राजदूत शर्मा
प्रदेशस्तरमा सम्बन्ध कायम गर्न पहल गर्छु । पहिला पर्यटकीय क्षेत्रमा लाने, हिन्दु र बुद्विजम जोड्न सकिन्छ । ठाउँ देखाएर लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्नेछु । यथार्थ कुरा प्रस्तुत गर्ने कुरामा विश्वास जगाउँछु । मेरो अनुभवले पनि मद्दत गर्छ । अनेस्टी, ट्रस्टले क्रेडिबिलिटी बढाउँछ । केही फरक कुरा गर्न कोसिस गर्छु । पुरानो अनुभवले पनि सफल हुन्छु भन्ने लाग्छ ।
राजनीति‐मा वर्गिकृतsamsadiya samiti, SamsadiyaSamiti, SamsadiyaSuniwai
राजदूत पद पाउनका लागि पदको दुरुपयोग गरेको छैन : प्रस्तावित राजदूत रेग्मी
सीमा स्तम्भ निर्माण गर्न पाँच बर्ष लाग्ने
चार राजदूत अनुमोदित
नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धलाई आत्मीय बनाउने प्रस्ताबित राजदूत आचार्यको भनाई